विप्लव समूहले जनसरकार र सेना बनाइसक्यो, निशानामा उपत्यका
काठमाडौं । नेकपा विप्लव समूहले जनसरकार गठन गर्नुका साथै जनसेना बनाएको सरकारले बताएको छ । साथै उसको निशानामा अहिले उपत्यका परेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बताएका छन् । आइतबार भएको बम..
जनताको २५ करोड रुपैयाँ खाएर सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालक फरार
बाँके। नेपालगञ्जस्थित सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको छ। सहकारी वित्तीय संस्थामा कार्यरत केही कर्मचारीबाट ठूलो परिमाणमा रकम अपचलन भएको संस्थाको सञ्चालक समितिले जनाएको छ। ग्राहकको करीब..
अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहकारीबाटै ऋण
काठमाडौं । युवालाई स्वरोजगार बन्नका लागि दाङको एक सहकारी संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन शुरु गरेको छ। बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सरकारी नीति तथा..
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको निधनको शोकमा आइतबार सबै अदालतमा बिदा दिएको गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश खत्रीको निधनको शोक प्रकट..
चार करोड नक्कली भारुसहित तीन पाकिस्तानी विमानस्थलमा पक्राउ
काठमाडौँ । चार करोड नक्कली भारतीय रुपैयाँसहित तीनजना पाकिस्तानी शुक्रबार दिउँसो त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। कतार एयरलाइन्सको विमान चढेर कतारको दोहाबाट काठमाडौँ आएका तीन जना ठूलो परिणाममा नक्कली भारतीय रुपैयाँसहित..
काठमाडौं । प्रदेश पाँचको सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेश सभामा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले आगामी वर्षमात्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र..
काठमाडौं । आकाशे पुलबाट हाम फालेर गम्भीर घाइते भएका कीर्तिमान राईको बिहीबार मृत्यु भएको छ । ताप्लेजुङ हाङपाङका २ का ६० वर्षीय राईले बिहीबार विहान कोटेश्वर कलंकी सडकखण्डको ग्वार्कोमा रहेको आकाशे..
किन लियो सरकारले अमेरिकी राजदूतसँग स्पष्टीकरण ?
काठमाडौं । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले सोमबार ट्वीटरमार्फत‘राजदूतसँग गफगाफ सुरु गर्न लागेको उद्घोष गरे । म सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरुसँग अन्तरक्रिया गर्न चाहन्छु तर सम्भवतः म अमेरिकी दूतावाससँग जोडिनुभएका..
एआईजी र डीआइजीको पद घटुवा नगर्न सर्वोच्चको आदेश, किन गरेको थियो सरकारले घटुवा?
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय अनुसन्धानका एआईजी यादव रेग्मी र डीआइजी मधु कार्कीलाई एक तह घटुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल..
राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता, ओली सरकारलाई झट्का
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमाणिकरणका लागि आएको राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरेकी छिन् । संसदका दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्ने..
काठमाडौं । गीतानगरका उपेन्द्र पण्डितको मोबाइलमा धादिङका प्रहरी हबल्दारले टेलिफोन गरेर उहाँको नामको मोटरसाइकल जुधेर मानिसको मृत्यु भएको खबर दिए। पण्डितलाई यो कुरा सुन्ने बित्तिकै छाँगाबाट खसे जस्तो अनुभव भयो। ..
न्यायाधीशविरूद्ध घुस लिएको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । लेखनाथ ढकालले घूस लिएको भन्दै परेको उजुरी तामेलीमा राख्ने न्यायपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकका उमेश बानियाँले तामेलीमा राख्ने निर्णय बदर गरी..
पाँचथरमा २ परिवारका ९ जनाको मुकुन्डोधारीद्धारा विभत्स हत्या
काठमाडौं । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३ स्थित आरुबोटेमा ९ जनाको विभत्स हत्या भएको छ । दुई परिवारका ९ जनाको गएराती हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ । एक परिवारको ५ र..
कसरी नेपालको भूभागमा भारतीय उपनिवेशको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो ?
कसरी नेपालको भूभागमा भारतीय उपनिवेशको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो : फणीन्द्र नेपाल ..
किन बनायो कांग्रेसले छाया सरकार ? यी हुन् मन्त्री
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ क अनुसार छाया सरकार गठन गरेका..
पूर्व एआईजी, डीआईजीको घरमा लुटपाट गर्ने ‘खुंखार डाँका’ विष्णु तामाङलाई गोली हानी पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका विष्णु तामाङलाई पक्राउ गरेको छ । ‘खुंखार डाँका’ को उपमा समेत पाएका उनलाई आज सोमबार विहान काठमाडौंको टोखाबाट गोली हानेर पक्राउ गरिएको हो..
११ वर्षपछि भिसा शुल्क वृद्धि, अब कति पुग्यो ?
काठमाडौं । सरकारले ११ वर्षपछि विदेशीका लागि भिसा शुल्क वृद्धि गरेको छ । सरकारले विदेशी पर्यटकलाई न्यूनतम १५ दिनको भिसा दिँदै आएको छ । नयाँ दस्तुरअनुसार भिसा शुल्क ३० अमेरिकी..
मुलुकको व्यापार घाटा १० खर्ब, भुक्तानी सन्तुलन ६४ अर्ब ऋणात्मक
काठमाडौं । मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यस आर्थिक वर्षको ९ महिनाको मुलुकको वित्तीय विवरणअनुसार व्यापार घाटा झण्डै १० खर्ब पुगेको छ। नौ महिनामा कुल वस्तु..
काठमाडौं । त्रिभुवन राजमार्ग धादिङको गजुरी खण्डबाट आइतबार बिहान बस त्रिशूली नदीमा खस्दा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । ३० जना घाइते भएका छन् । काँकडभिट्टाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ना७ख ४३८७..
भारतीयद्वारा नेपाली कुटिएपछि स्थिति तनावग्रस्त
रासस । पश्चिमी पर्साको ठोरी नाकासँग जोडिएको भारतको भिखना ठोरी बजारमा किनमेल गर्न गएका नेपालीलाई भारतीयले बिहीबार लखेटी–लखेटी कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि सो क्षेत्रमा अहिले स्थिति तनावग्रस्त भएको छ..
मदन भण्डारीको हत्याराको खोजी सुरू, छिट्टै पत्ता लाग्छ-गृहमन्त्री
काठमाडौं । जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्यारा खोजी प्रक्रिया सुरू गरिएको दाबी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले गरेका छन् । २६ औं मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा मदन भण्डारी स्मृति बाटिका,..
सीमा क्षेत्र रुपन्देहीमा गोली चल्यो, तीन प्रहरी घाइते
बुटवल । रुपन्देहीको नेपाल भारत सीमा नाका शंकरपुरमा विहीबार गोली चलेको छ । भारतबाट हतियार लिएर नेपाल प्रवेश गरेको भारत महाराजगंज जिल्ला फरेन्दाका झिनक धोबीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा गोली..
नेकपाले तोक्यो जनवर्गीय संगठनको संयोजक र सहसंयोजक, को को भए
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जनवर्गीय संगठनहरुको नेतृत्व टुङ्गो लगाएको छ । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले तत्कालीन एमाले र माओवादीको भागवण्डाका आधारमा अधिकांश जनवर्गीय संगठनको संयोजक र सहसंयोजक..
त्रिशुलीमा बगाउन लागेको लास त मदन भण्डारीको पो रहेछ
चितवन । २०५० साल जेठ ४ गते। चितवनको चर्को घाम। विहानको करीब ११ बजेको समयमा गाँजीपुरसँग जोडिएको नारायणी नदीमा माछा मार्न ४ जनाको समूहमा साथीहरुसँग गएका थियौँ। नदीमा माछा मारेर..
के आपत पर्यो अमेरिकालाई ? विदेशी प्रतिद्वन्द्वीहरूबाट जोगाउन राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि जोखिम पुर्‍याउन सक्ने ठानिएका दूरसञ्चार उपकरण अमेरिकी कम्पनीहरूले प्रयोग गर्न बन्देज लगाउँदै एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ट्रम्पले अमेरिकी सञ्चार सञ्जालहरूलाई..
किन कांग्रेस कार्यकर्ताले मन्त्री यादवमाथि कार्यकक्षमै हातपातको प्रयास गरे ?
काठमाडौं । सरुवाको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा उद्योगमन्त्री मातृका यादवको कार्यकक्षमा झण्डै हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उद्योग विभागमा भएको सरुवाको विषयमा..
काठमाडौं । तपाइँले मोटरसाइकलको चाबी लगाउन भुल्नु भएको त छैन? चाबी लगाए पनि ह्याण्डिल बन्द गर्न पो बिर्सनु भयो किरु या असुरक्षित ठाउँमा पार्किङ गर्नु भएको त छैन? त्यसो भए..
७८ लाख घुस लिएका राजनारायण पाठक विशेष अदालतमा हाजिर भए
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक अदालतमा हाजिर भएका छन् । पाठक बुधबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका छन् । अहिले अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी..
कस्ले लगायो १ करोड २० लाख रुपैयाँ पर्ने मेयरको गाडीमा आगो ?
काठमाडौं । अछामको मंगलसैन नगरपालिकाका मेयरको गाडीमा मंगलबार राति अज्ञात समूहले आगजनी गरेका छन् । मेयर पदम बोहराले चढ्ने गरेको बा २ झ ३६९४ नम्बरको गाडीमा आगो लगाइएको छ । गाडी..
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाउने काम नहुने बताएका छन्। नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय सौराहाको फाइवर टु द होम सेवाको आज उद्घाटन गर्दै उनले प्रेसका..
Results 1994: You are at page 11 of 67